Home Wararka Ciyaaryahaynka weyn Ambry Thomas oo ku sugan Somaliland, howlo tabaruca kawada halkaas
Ciyaaryahaynka weyn Ambry Thomas oo ku sugan Somaliland, howlo tabaruca kawada halkaas
Waxaa magalaada Hargeysa ku sugnaa maalmihii la soo dhaafay ciyaaryahanka weyn Ambry Thomas ee u ciyaara kooxda San Francisco 49ers. Ambry Thomas ayaa go’aansaday in uu qayb ka mid ah fasaxiisa ku qaato soo dhawaynta Ramadaanka iyo wax u qabashada bulshada danyarta ah ee ku nool Somaliland oo dhan.
Thomas waxa uu kumanaan mayl la soo safray hay’adaha samafalka ee Mercy-USA iyo Muslimiinta Adduunka si uu ugu wacyigeliyo xaaladaha nololeed ee murugada leh ee Somaliland.
Muqdisho Online oo la xiriirtay Ciyaaryahan Ambry Thomas ayaa u sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu kaalin ka qaato da’daalada lagu caawinayo dadka Somaliland ee ay dhibaatada ka soo gaartay abaaraha iyo Dabka qabsaday Somaliland.
“dadka Somaliland dhibaato ayaa haysata, wixii aan aniga awoodo waan ku taakulayanayaa” Ayuu yiri Ambry
Somaliland waxaa hadda ka taagan abaartii ugu darneyd ee soo marta muddo tobanaan sano ah, taasoo keentay in malaayiin qof ay quus ka istaagaan biyaha. Maalinimadii Axada ee bishu ahayd 3-Apriil waxa dab xoogan uu ka kacay suuqa Waaheen oo ah il dhaqaale oo ay ku nool yihiin dadwaynaha ku dhaqan caasimada Somaliland.
Sida ay sheegeen mas’uuliyiinta deegaanka, ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhaawacantay dabkaas oo baabi’iyay hanti gaareysa 2 bilyan oo dollar.
Thomas waxa uu baraha bulshada ku qoray sida ay xaaladdu quus uga taagan tahay, isaga oo la wadaagaya khibradiisa gaarka ah ee xaaladaha deegaanka iyo burburka suuqa Waaheen. Waxa uu ku dhiirigeliyaa taageerayaashiisa iyo taageerayaashiisa inay ku tabarucaan hawsha iyagoo u dhigma deeqaha $50.
“Way naga weyn tahay,” ayuu yiri Thomas. “Waxay ku saabsan tahay fidinta gacmahaaga iyo caawinta kuwa kale ee u baahan gargaarka… Walaalaheenna halkan jooga waxay u baahan yihiin gargaarkeenna hadda.”
Laacibka Thomas wuxuu si gaar ah ula shaqeeyaa ururada samafalka oo siin doona ilaa 30 maalmood oo biyo ah qoyska oo dhan. Sida ay sheegtay Mercy-USA, dadaalkoodu waxa uu gacan ka geystay qodista iyo dayactirka in ka badan 750 ceel oo ku yaalla Soomaaliya iyadoo in ka badan 750,000 oo qof ay ka faa’iideysteen barnaamijkooda biyaha nadiifka ah.
Thomas ayaa markii uu baraha bulshada ku faafiyay wacyigelintiisa waxa u suurtagashay in uu gaadho 10,570 taageereyaal ah oo ka qayb qaadanaya ololaha gurmadka biyaha Somaliland kuwaas oo soo ururiyay lacag dhan $526,867. Thomas waxa uu taageero ka helay saaxiibadiisa 49ers khadka internetka, iyadoo Trey Lance, Talanoa Hufanga iyo George Kittle ay jacayl u muujiyeen Thomas dadaalkiisa Somaliland.
Previous articleAmbry Thomas Gives Back in Humanitarian Trip to Somaliland
Next articleIska hor imaad u dhexeeya ciidanka NISA & AMISOM oo Xalane ka jira
Shiikh Sharif oo si toos ah ugu biiray Mucaaradka iyo Xildhibaanada...